အကြိမ်(၈ဝ)မြောက် လမ်းမတော် တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော် စည်ကားစွာ ကျင်းပ - Yangon Media Group
တန်ဆောင်တိုင်ကာလရောက်သည်နှင့် နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သည့် လမ်းမတော် ပွဲဈေးရှိ ဈေးသည်များသည် ပွဲဈေးကာလအတွင်း မိုးရွာသွန်းမည်ကို စိုးရိမ်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါလမ်းမတော်ပွဲဈေးကို နိုဝင်ဘာ ၂ဝ ရက်မှ စတင်ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုနှစ် မှာ အကြိမ် ၈ဝ မြောက်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ ”ပွဲဈေးက မစခင်ရက်ကတည်းကတော့ စည်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပွဲဈေးရက်မတိုင်မီ မိုးရွာထားတာတွေရှိတော့ မိုးဖျက်မှာ ကြောက်တယ်။ လာတဲ့သူတွေကတော့ အရင်နှစ် တွေတုန်းကလိုပါပဲ စည်စည်ကားကားရှိပါတယ်”ဟု ပွဲဈေးတွင် မြန်မာမုန့်များ ရောင်းချ နေသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဒေါ်တင်တင်နွယ်က ဆိုသည်။
လမ်းမတော်ပွဲဈေးသည် လမ်းမတော်လမ်းနှင့် အနော်ရထာလမ်းဆုံသည့်နေရာမှ စတင်ကာ အနော်ရထာလမ်းတစ်လျှောက် လမ်းမတော် ၃ လမ်းအထိဖြစ်ပြီး ပွဲဈေးကို နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ပွဲဈေးတွင် ရောင်းချနိုင်ရန်အတွက် ဆိုင်ခန်းဈေးနှုန်းများမှာ တစ်ညလျှင် ကျပ် ၅ဝဝဝ မှစတင်ရှိကာ ဆိုင်ခန်းအလိုက် ဈေးကွဲပြားကြောင်းလည်း ရောင်းချသူများထံမှ သိရသည်။ ထို့အပြင် လမ်းမတော် ၁၃ လမ်း၌လည်း လူ့ကျင့်ဝတ်ခေါင်းစဉ်နှင့် ကာတွန်းဆရာ ကြီး ဦးဘဂျမ်းကို ဂုဏ်ပြုသည့် ကာတွန်းပြပွဲကိုလည်း ကျင်းပလျက်ရှိသည်။
”ရေကျော်ပွဲဈေးတုန်းက အချို့ရက်တွေမှာ မိုးက မုန်တိုင်းရှိလို့ မိုးရွာလိုက်တော့ ဈေးသည်တွေ တော်တော်အထိနာသွားတယ်။ ဈေးရောင်းမကောင်းတဲ့ရက်တွေရှိခဲ့တယ်။ ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပဲ ဆုတောင်းရမှာပဲ”ဟု ဈေးသည်တစ်ဦးက ပြောသည်။ အဆိုပါကာတွန်းပြပွဲမှာလည်း ယခုနှစ်တွင် ၇၅ နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ပြပွဲတွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ကာတွန်းဆရာ အယောက် ၅ဝ ၏ ကာတွန်းလက်ရာ ၃ဝဝ ကို ပြသချိတ်ဆွဲထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကာတွန်းပြပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်မှ ၂၃ ရက်အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး လူ့ကျင့်ဝတ် ခေါင်းစဉ်နှင့် ကိုက်ညီသည့် ကာတွန်းလက်ရာများကို ရွေးချယ်ကာ အထူးဆု၊ ပထမဆု၊ ဒုတိယဆုနဲ့ တတိယဆုဟူ၍ ချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် ကျင်းပချိန်ရက်အတွင်း နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် မိုးကြိုး ငှက်ငယ်လေးများခေါင်းဆောင် စောနန္ဒာ(ြှဃ) ဦးစီးသော ကြည်လဲ့လဲ့ဦး၏ အဆင့်မြင့် ကပွဲ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် စံလင်း၊ နောက်တိုး၊ ချက်ကြီး၊ ဖိုးသဲနှင့် မင်းသမီး စုသဒ္ဓါမိုးချစ်တို့၏ မြန်မာပြည်စတားအငြိမ့်အဖွဲ့၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် လမ်းမတော်မြို့နယ်လူငယ်များ၏ ကျြငခ ဥညန ညြေိ စင်တင်တေးဂီတနှင့် ပင်တိုင်တေးသံရှင် များ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်လင်းဇာနည်ဇော်နှင့်အဖွဲ့၊ ယုန်လေး၊ ဆူဇီ၊ီဖြိုး၊ျွှလျှံ၊ ချစ်လွန်း ဇော်၊ွှမခေု ဌ၊ ဥက္ကာ၊ံငစံသအ တေးသံရှင်များ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် လမ်းမတော် မြို့နယ်ဂီတအစည်းအရုံး ဦးစီးသော ရွှေရောင်နှလုံးသားတေးဂီတဝိုင်းနှင့် တေးသံရှင် များ၊ တင်ဦးလေး၊ ကေတုဝင်းထွဋ်၊ ဇော်မင်းထွန်း၊ ချိုပြုံး၊ ပိုးအိစံ၊ ခင်ညွန့်ရီ၊ ရွှေယမင်းဦး၊ ယဉ်ဝေယံထွန်း၊ စိမ့်နေခြည်၊ မို့မို့ကျော်လွင်၊ အိုပြည့်ရှင်နှင့် တေးသံရှင်များ ဖျော်ဖြေကြ မည်ဖြစ်သည်။ လမ်းမတော်တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကို ၁၉၃၈ ခုနှစ်က စတင်ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်ဆိုလျှင် အကြိမ် ၈ဝ မြောက်ဖြစ်သည်။
ဂွါတီမာလာတွင် မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် လူ ၄ဝဝဝ ဘေးကင်းရာ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရ
မေတ္တာတရားသည် ဘာသာ အားလုံး၏ ဆုံချက်ဖြစ်ပြီး ယင်းအပေါ်တွင် ဘာသာဝင်အားလုံး ရပ်တည်နိုင်ရန် အား?
တိုက်ပွဲများအတွင်း ပိတ်မိနေသော ပြည်သူများ လွှတ်ပေးရေး လှုပ်ရှားမှုကြောင့် မန္တလေးမြို့၌ ဖမ်းဆ
”ဇာတ်တွေကို ခေါင်းခေါက်ရွေးချယ်တဲ့ အနေအထား အခုအချိန်မှာမရှိတော့ဘူး” လူမင်း
ချင်းတောင် ဝဥစိုက်ပျိုးရာသီတွင် ဝဥမျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုးသူထက် အသေးစားဝဥဖြင့် ဥချ စိုက်ပျု??